Uhamba njani ukuya eNyakatho Korea | Iindaba Zokuhamba
UMariela Carril | 02/09/2021 17:00 | Ukuhlaziywa ukuba 02/09/2021 20:24 | Iingcebiso, North Korea
Ambalwa amazwe obuKomanisi aseleyo emhlabeni kwaye elinye lawo kunjalo North Korea. Umbuzo ngulo, ndingaya na ukubona indawo phaya? Ayililo ilizwe elivulekileyo kukhenketho oluninzi kodwa nangona kunjalo, unokutyelelwa.
Ngaba unomdla wokuvula le festile kwixesha elidlulileyo? Okanye ngaba lihlabathi elifanayo? Inyani yile yokuba ngokungathandabuzekiyo inokuba yinto engalibalekiyo. Masibone ngoko indlela onokuyenza ngayo ukuya eNyakatho Korea, yeyiphi inkqubo emayilandelwe kwaye yintoni enokwenziwa apho.
2 Ukuya eNyakatho Korea
IDemocratic People's Republic yaseKorea ikwi Asia empuma kwaye yinxalenye esemantla usingasiqithi waseKorea. Ngaba umda ne China ne Russia Ewe kunjalo noMzantsi Korea, UMmandla oDityanisiweyo.
I-peninsula yaseKorea yayisezandleni zamaJapan ukusuka kwi-1910 de kwaphela iMfazwe yesibini (II) yeHlabathi (Ke, amaKorea awathandi amaJapan kakhulu), kodwa emva kwembambano yahlulahlulwa yangamacandelo amabini.
Kwelinye icala yayiyimikhosi yeSoviet Union nakwelaseUnited States. Lonke uthethathethwano lokudibanisa ilizwe aluphumelelanga kwaye, kwaye, kwayeNgo-1948, oorhulumente ababini bazalwa, iRiphabhlikhi Yokuqala yaseKorea (emazantsi), kunye neRiphabhlikhi yaseDemocratic People's Republic yaseKorea, emantla.
I-North Korea ngurhulumente wobusoshiyali, kunye nenkolo yobuntu benkokeli eqhelekileyo ngamanye amaxesha. Ulilungu lesithathu lendoda kusapho olulawulayo lukaKim. Lilizwe elihlala kwixesha elidlulileyo lobusoshiyali: iinkampani zikarhulumente, iifama ezihlangeneyo kunye nomkhosi othatha imali eninzi.
Ngokubhekisele kwinkcubeko, nangona kukho ifuthe elicacileyo laseTshayina, inyani kukuba inkcubeko yaseKorea iyonke (ukusuka emazantsi nasemantla) ifumene ifom eyahlukileyo engenabundlobongela benkcubeko eyenziwa ngamaJapan ngexesha lokuhlala. Ngoku, kwiminyaka eyalandela inkululeko, abantu baseKorea baseMzantsi baqala ukunxibelelana kakhulu nehlabathi ngelixa amaKorea aseNyakatho aqala ukuzivalela.
Ke, ukuba uMzantsi Korea luhlanga lwala maxesha kuthi, I-North Korea ibuyele kwinkcubeko yemveli, ngeendlela ezininzi zabantu bafumene amandla amatsha.
Ukuya eNyakatho Korea
Siyavuma ukuba ayisiyiyo eyona nto ixhaphakileyo emhlabeni ukuhamba njengotyelelo eNyakatho Korea. KUNYE abanye abantu abanakho ngqo yenza, umzekelo, amaMelika, amaKorea aseMzantsi okanye abo baseMalaysia. Abanye bethu banokuhamba, kodwa ngokulandela uthotho lwamanyathelo.
I-Primero, ngekhe uye ngokwakho emantla ekorea. Kuphela ngomqhubi wabakhenkethi ngubani ekufuneka enze ukubekisa egameni lakho kwaye enze nenkqubo ye-visa, asayine isivumelwano, akunike ikopi yeso sivumelwano sepaspoti yakho.
Ngaphambi kokuba kubekho izithintelo ezinzima kodwa okwexeshana ukuba yinxalenye yabo bayekelele kwaye bakucela kuphela ukuba uchaze igama lenkampani osebenza kuyo kunye nomsebenzi. Kodwa lumka, ukuba ngethuba usebenza kumajelo eendaba okanye umbutho wezopolitiko wamalungelo oluntu, kukho ithuba lokuba abayi kukunika visa.
Njalo iya kuqala nge China kuqala kwaye ivisa yaseNyakatho Korea inokufunyanwa ngelixa ulapho. Oko kuya kuchazwa yiarhente. Into elungileyo, bekukho into elungileyo, kukuba le nkqubo ayenziwa nguwe kwindlu yozakuzo.
Banokufumana isitampu sepasipoti yakho kumasiko njengoko bengenako. KUNYE ivisa ayingeni kwipaspoti kodwa ngokwahlukeneyo. Kwaye kufuneka uyihambise xa ushiya ilizwe. Ngaba uyafuna ukuyigcina njengesikhumbuzo? Kukulungele ukuyikopa, ngakumbi ukusoloko ubuza isikhokelo kubakhenkethi ukuba ungayenza okanye hayi. Kuyacetyiswa ukuba ungaziqhekezi phezulu.
Ngokumalunga nokukhethwa kukho ngokotyelelo, kulungile ukwazi ukuba uya kuba nakho ukubona ngaphezulu kwekomkhulu, iPyongyang. Ungaya eRason, indawo ekhethekileyo yezoqoqosho, ungatyibilika eMasik, unyuke eyona ntaba iphakamileyo eyiNtaba yePaektu okanye uye kumnyhadala wenkcubeko.
Ewe ungathatha iifoto. Kuyatshiwo ukuba abayi kukuvumela, kodwa ayiyonyani okanye ubuncinci ayiphelelanga. Ukuba yingqondi, ukubuza isikhokelo sakho kwaye ngaphandle kokwenza umboniso weefoto kunokwenzeka. Kwaye ngokucacileyo, konke kuxhomekeke ekubeni uphi kwaye ngubani okanye yintoni ofuna ukuyifota.
Abakhenkethi abavumelekanga ukuphatha iincwadi okanye iiCD okanye nayiphi na into enjalo, ayizukuba yinto echaphazela inkcubeko engcwele yaseNyakatho Korea. Kwaye iya kusebenza ngenye indlela ejikeleze, ngaphandle kokuthatha "izikhumbuzo." Ukufumana kwakhona, Zeziphi iindawo endinokundwendwela eNyakatho Korea?
Pyongyang ngumnyango wangaphambili. Uya kuhamba ngezikwere kunye nezikwere ezinemifanekiso emininzi. Ukhenketho luchaphazela kakhulu ezopolitiko kulo mzi kuba awuyi kulishiya ilizwe ungenawo umfanekiso omhle wenkokeli. Emva koko, uya kuyibona I-Kumsusan Palace yeLanga, iSikhumbuzo seQela eliSisiseko, isikwere sikaKim II, iArc de Triomphe, kunye neMausoleum kaKim II-sung kunye noKim Jong-il okanye iMansu Hill Monument.
Ngaphaya kwebhasi nayo ungahamba ngeMetro, into enokwenzeka kubantu bamanye amazwe kuphela ukusukela ngo-2015, okanye Ukuhamba ngebhayisikile okanye ukuthenga. Oku kuyonwabisa ngakumbi kwaye ngaphandle kwamathandabuzo, ongalibalekiyo. Emva, enye indawo eRason, indawo ekhethekileyo yezoqoqosho. Ikhetheke kakhulu, ekuphela kwendawo apho ubuzwilakhe bobukomanisi buvumela iintlantsi ezithile zongxowankulu. Sisixeko esikufutshane kakhulu nemida neRussia ne China.
IMasik yindawo yokuskiya. Nantsi Irizothi yeMasikki, indawo esemgangathweni olungileyo ngokweelifti, izixhobo kunye nendawo yokuhlala. Kwaye iindawo ezininzi zekaraoke kunye neeresityu. Unako ukuya kwiimitha ezili-1200 kwaye wonwabe ngeekhilomitha ezili-100 zamathambeka.
IChongjin sisixeko sesithathu ngobukhulu eMantla Korea kwaye yintliziyo yoshishino. Kukude kwaye kwamkela iindwendwe ezimbalwa Kodwa mhlawumbi yiyo loo nto uyithanda ngcono. Inesikwere esiphakathi yeyona ndawo inomdla kakhulu, kunye nemifanekiso eqingqiweyo yeenkokheli, ngokucacileyo. Kwaye sifika. Ayikho enye into eyenye. Phakathi kwento yokuba lilizwe elincinci kakhulu kwaye inesithintelo esisigidi ...
Ewe, ekugqibeleni sinokubathiya abaqhubi bezokhenketho: Ukhenketho lweKoryo (ebiza kakhulu, ihlala ifumana abahambi abadala kwaye hayi uninzi lwabantu abancinci), Ukhenketho lweUri (ngabo abalungiselela uhambo lukaDennis Rodan), Ukuhamba kweLupine kunye neeNkonzo zokuHamba zeJuche (zombini isiNgesi), Ukuhamba ngendlela enamatye (esekwe eBeijing), I-FarRail Tours kunye ne-KTG. Ezi zikwiwebhu rhoqo, kodwa eyona ithandwa kakhulu nayo Uhambo loVulindlela Oselula.
Le arhente yokugqibela inikezela ukhenketho olusisiseko kwi-euro ezingama-500 (indawo yokuhlala, uloliwe iBeijing- iPyongyang-Beijing, izidlo, ukuhanjiswa ngezikhokelo, imali yokungena. Akubandakanyi iindleko ezongezelelweyo, iziselo kunye neengcebiso, kodwa ngabo abajongene nokwenza i-visa kunye namatikiti. Zonke ezi arhente zisebenza norhulumente waseNyakatho Korea ke ngokhenketho olucwangciswe nguye.
EMantla Korea awusoze ube wedwa. Awungekhe uhambe ngeqela, ewe, kodwa kube kanye kumhlaba waseNyakatho Korea baya kuhlala bekugcina, ukusukela ekufikeni kwakho ukuya ekuhambeni kwakho, ukusukela oko uvuka kusasa kude kube sebusuku. Awunakushiya ihotele wedwa, ungasuki kwisikhokelo okanye kwiqela, ungakhwaza, ungabaleki, ungachukumisi imifanekiso okanye imifanekiso yeenkokheli ezihloniphekileyo, okanye uthathe iifoto zabo bezinqumle iintloko ...
Akukho zintuthuzelo okanye tofotofo, Ubomi bulula kakhulu, bumda kumngcipheko ngamanye amaxesha. Akukho zibhengezo kwiindlela zikawonke-wonke, akukho Internet, ulawulo luhlala luhleli. Kungenzeka ukuba awuyi kufumana iphepha langasese okanye isepha, ekuhambeni kwakho uphuma ngaphandle kwekomkhulu uye kwiindawo ezingenawo umbane okanye amanzi ashushu. Kunjalo, wonke umntu owayesithi imvakalelo yokungaqheleki kunye nokungeyonyani ibaluleke kakhulu.
Inyani yile yokuba ukhenketho olunjalo alukude nolonwabo okanye uhambo lweholide, kodwa ngokuqinisekileyo yinto ongasoze uyilibale.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Uhambo » Iingcebiso » Uhamba njani ukuya eNyakatho Korea